nabin lohorung: लैङिक अद्द्यनको उत्पती र बिकास
Posted by namsang on Tuesday, September 14, 2010
लैङिक अद्द्यन र उत्पतिको मुख्य जराको रुiपमा ऐतिहासिiक घटना, महिला आन्दोलन र महिला सम्बन्धी साहित्य हुन।
ऐतिहासिक घटना- १७औ सताब्दिकोr अन्त्य तिर र आठरौ सतब्दिको शुरुतिर यूरोप र अमेरिकामा बिकासको समय थियो जसलाई हामी period of enlightenment भन्दाछौ। यस समयमा धर्मिक स्वतन्त्रता, तर्क,प्रबिधी,समनता को आदर्श बिकास भएको थियो। फ्रान्सको क्रान्तिलाई यस्तो रुपमा हामी चिन्न सक्छौ।
फ्रान्सको क्रान्ति ले पनि यही स्वतन्त्रता,समनता र भात्रित्वको आदर्शलाई बोकेको थियो। त्यसपछी को क्रान्तिलाई सम्पूर्ण मानबको अधिकारको क्रान्ति भनियो। अग्र पङ्तिका महिलाबादी लेखक मेरी वल्लस्तिअन्क्रफ्तका अनुसार लोग्ने मान्छे र भाईचाराले मात्रै हैन त्यमा प्रिथबीको आधा भाग महिलाले ओगटेको छ। e
त्यस्तै लैङिक अध्ययनको लागि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना औधोगिक क्रान्तिलाई लिन सकिन्छ जसले पूँजीवादको जन्म दियो। औधोगिक क्रान्तिले महिललाई दुई किसिमले प्रभाब पारेको थियो।
१ पहिलो- महिलाको घर भित्रको काम र समयलाई कम गरिदियो २ दोस्रो- धेरै महिलालाई सार्वजनिक छेत्रमा समाबेश गर्नलाई मदत गर्‍यो। यसले समाज मा बद्लिदो परिस्थितीमा महिलालाई परिवर्तन हुन मद्त गर्‍यो।
महिला आन्दोलन- महिला हरुको पहिलो तरङको आन्दोलन १८६० यूरोप र अमेरिका मा सुरु भएको थियो। त्यसको मुख्य उदेस्य मतदिने अधिकार भएपनी, महिलाको समानता र स्वतन्त्रता थियो। दोस्रो तरङ जुन १९६० मा सुरु भएको थियो। त्यसपछिका दिनहरुमा धेरै महिला सम्बन्धी सिद्धन्तहरु बिकास भयो पाइन्छ। मध्य १९औ सतब्दी तिर सामाजिक बिचारधारा भएको मान्छेहरु महिलाको समाजमा भूमिका बारे लेख्न वाध्य भए। यसरी लैङिक अध्ययन सुरु भएको थियो।
महिला साहित्य - mery wallastaincraft,' vendication of the rights of women' प्रकाशन भएदेखी धेरै महिला सम्बन्धी दृष्‍टिकोन हरु बाहिर आएका थिए।
लैङिक बिकास- लैङिक बिकास कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा महिला र पुरुष दुबै समाजीक सँरचना सँग सम्बन्धित छन। मुख्यतय लैङीक अध्ययन १९६०को दसक बाट महिलाको सचेतना सँगै पुरुष बाट दबिएका बिषय आउन थालेका हुन। महिलाको बिषयमा मानब शास्त्रमा प्रश्न उथाईन थालिएको हो। यसले महिला केन्द्रित अबधारणालाई प्रधान दियो। लैङिक अद्द्ययनका महत्वपूर्ण बिषयहरु
१-कसरी र समाजिक सस्थागत अबधारणाले लैङिक फरक पार्यो?
२- कसरी सबै समाजमा महिलाहरु पुरुष निर्भर भएको देखिन्छ?
लैङिक आन्दोलनका बर्तमान धारहरु-
साधारणतय १९८० को दसकपछी लैङिक अद्द्ययनले समाबेश गरेका बिषयहरु
-महिलाको अवस्था समाजिक समरचना ,आफन्त,परिवार र आर्थिक घरेलुमाl
-महिलामा आधुनिकताको प्रभाब,बिशेष ग्रामीण महिलामा
-औधोगिकरन र भुगोलिकरन को महिलामा असर
©2008. All rights Reserved लैङिक अद्द्यनको उत्पती र बिकास